Indonesia in Focus: Geedo Xeebeedka waxaa lagu Abaal marin karo, geedo ay soo jareen Dambiilayaasha ah karaan.
Geedo Xeebeedka waxaa lagu Abaal marin karo, geedo ay soo jareen Dambiilayaasha ah karaan.
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (370)
(Qaybta saddex boqol iyo toddobaatan), Depok, West Java, Indonnesia, September 14, 2015, 16:03 pm).
Ilaah in uu hadalkiisii ku Quraanka ka digtay dadka had iyo jeer ma sameeyaan wax shar ah sida jarida dhirta doono in dhulka, dadkuba dilo kasta oo kale oo ay galaan shirk (-hawlgalayaasha wadaajiseen Eebe).
Sababtoo ah damac aadanaha sharci darro ah ayay geedo jareen, iyo caajis in geedaha dhirta in ay deegaanka, laga dhisayo meelaha dhirta ay keentay nabaad, kaynta meel cidla madhalays soo jeestay, keeni karo isbedelka cimilada caalamka.
In Indonesia, shirkado iyo shaqsiyaad dalka ku beer furan by kaymaha gubanaya, natiijada hadda Sumatra, Borneo, Malaysia iyo Singapore xitaa ay saameeyeen wasaqowga hawada oo ah qaab qiiq.
Haddaba sidaas daraaddeed waxaan soo food cimilada xad-dhaaf ah, duufaanada ciid, abaaraha, daadadka iyo masiibooyinka dabiiciga ah ee kale.
In 1969, xeebta ee Kampung Baru Central, oo ah magaalada Balikpapan, East Kalimantan, subax walba ama habeen qalabka fudud ayaan weli ka cadhaysiiyaan karaan noocyada kala duwan ee kalluunka iyo xayawaan badeed, iyo carsaanyo carsaanyo xeebta, si ay hooyaday ficil ahaan uma baahna in ay soo iibsato kalluunka iyo carsaanyo carsaanyo ee suuqa, laakiin markii aan ku soo laabtay mar kale in meel ka mid ah sanadkii 1990, ma kalluun iyo haysteen doontooda carsaanyo baan ka heli, sababtoo ah xeebaha sumoobay la nijaasta kala duwan wasakh ah laga bilaabo saliid cayriin in la tirtiro caag ah. Waxaan aaminsanahay in la mid ah ayaa sidoo kale la kulmay xeebta ee Jasiiradaha kale ee Indonesia iyo xitaa adduunka.
Jirridda kasta (danta) in aan ku beeray in ay ku siiyo barakadii ah noolaha, laga bilaabo oxygen, midho sida shimbirro muhuumsan iyo xayawaanka kale, si ay u yaboohay Eebe ajir weyn kuwa koraan ama ay u ilaaliyaan, lid ku ah gaystay burbur ee ku dhulka, si hunguri weyn hoos jarida kaymaha heli lahaa Cadaabka adduunka (duufaanada, abaaraha, qiiq), iyo sidoo kale ciqaab / cadaabka aakhiro (Jahannamo).
(BBC) - caalamiga ah Pemanasa? Isbedelka cimilada? Haddii aad akhrido wargeysyada, dhegayso raadiyaha, daawado TV oo isticmaalaysa internet, waa in labada hore u yaqaanaan ku hay.
Cimilada uu is beddelay iyo heerkulka dhulka ay ku kici, sida uu sheegay in wasiirka deegaanka Rachmat Witoelar.
"Isbedelka ma aha xilli cad. Xilli-roobaadka waa qalalan, roobabkii xilliga qalalan. Waa mid ka mid ah isbedelka cimilada. Waa sababta oo ah isbeddelka cimilada."
"Wixii kalluumaysatada, waxaa kale oo jira hadda badda in la beddelo, badda kulka biyaha ayaa sidoo kale bedelaa isbedelka ka dhigan tahay in kalluunka bedelay," ayuu hadalkiisa raaciyay Rachmat.
"Waxa kale oo jira Qoryaale shacaab waxyeeleeyeen kulaalaya biyaha badda iyo biota badda si mikroplankton jebiyey. Haddaba waxaa dhacay wax la yaab leh," ayuu yidhi wasiirku.
Dheeraad ah oo ku Kulaylka
Laakiin waxa ku saabsan nolol maalmeedka? Waxaan soo booqday qaar ka mid ah meelaha la su'aasha ah waxa uu is beddelay ee dabiiciga ah marka la barbar dhigo xaaladda 10 ama 20 sano ka hor?
Ujeeddada hore ee Degmada Malinau, East Kalimantan, loo yaqaan Degmada Ilaalinta. Of aagga guud ee 4.2 million hektar, meel ka mid ah 3.9 milyan, ama qiyaastii 90%, waa meel duud, oo ay ku jiraan KMNP iyo kaymaha la ilaaliyo. 4 saac safar doon ka Tarakan.
Uman, 37 sano jir, ayaa uu ku nool yahay ka doomo motor tan iyo 1990, oo uu sheegay in wax ka bedelay Sesayap River kii soo ag maraaba darsin sano.
"Haddii gusung ugu horeysay dhif ah, dhexe ee webiga muuqday jasiiradda cusub oo ciid isku qasan ciidda. Waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay saameynta ay daadadka, haddii hore ee 1990 waxaa dhif ahayd Fatahaad laakiin ka dib markii uu 1995 ku dul gusung bilowga berunculan," ayuu yiri Uman.
Haddii loo isticmaalo qabsiyada Fatahaad laakiin hadda waa badan tahay, maxaa yeelay, wax badan oo alwaax la goostay, inta badan daadad. Haddii roob hubaal daadad
Sapi Island, oo ku saabsan drive saacad caasimada degmada Malinau ah, weli dareensan yahay Ereyada ah.
Meelaha qaar ka mid ah beeraha calaamadaha muuqda ayaa ka bariyeelay dadka deggan Lundayah la isticmaalayo nidaamka beerista qoqobada.
Odayaasha Lundayeh, New Belapang, hubiyo.
Waagii hore, ayaa sheegay in Belapang saasuuna, haddii muwaadiniinta beeraha, bariis bacrin-rays, dalagyo kale oo sidoo kale u fiican yihiin. "Sida midho ah, in aynaan markii aad abuurto miraha macaan oo macaan waa hubaal," ayuu yiri.
"Laakiin haatan oo kale ah, haddii nuxurka miraha la beero dhammeeyayna macaan oo dhanaan. Geedaha in rambutan iyo durian acid midho haddii ugu horeysay qaro weyn, hadda oo khafiif ah," ayuu yiri.
Belapang ayaa sheegay in uu ogayn waxa sababay isbedelka.
"Hadda dad badan oo jinaya," Ka hor 1950-ha qalalan 3 bilood, biyaha sidaas ma aha, si degdeg ah oo taxne laakiin hadda qalalan hal bil oo kaliya biyo u engegay, "ayuu yiri.
"Hadda cawska qarkiisa webiga markii ay abaartu ka engegay, laakiin cawska aan xitaa 3 bilood qalalan webiga qarkiisa oo aan ilaa goormaad ka," ayuu yiri Belapang.
Beeralayda kale, Martin Ukung, dareemaan cimilada tuulada, Pulau Sapi, kulaylka ka badan.
"Waa aan waayo-aragnimo waa natiijada ubax midho kulul si engegay by kulaylka oo aan si badan dhala. Taasi aan waayo-aragnimo ka badan 10-sano ee lasoo dhaafay. Ubax, laakiin sidaas ma aha midhaha."
"Qorraxdu waa mid aad u kulul haatan, laakiin ma aqaano waxa sabab u yahay. Laakiin waxaan dareemayaa xaalad aad u heli lahayd kulul."
Laga soo bilaabo Borneo, waxaan u wareegay Sulawesi. Bajoe ilmo ee qabiil qubeyska iyada oo barxadda dambe. About 15-daqiiqo ee Lafta, South Sulawesi.
Bajoe kalluumaysatada intooda badan isticmaalaan waxyaabaha qarxa si ay u qabtaan kalluun
Aan ka fogayn dekedda doon Lafta-Kolaka, ku dhowaad 400 qoys oo ku noolaa tuulada qabiilka Bajoe Kolaka, Kampung Bajoe.
Inkasta oo xeerkii nolosha badda muddo dheer ka tagay, barkado yar oo biyo ah brackish weli hoos stage guriga.
Bajoe kalluumaysatada intooda badan isticmaalaan waxyaabaha qarxa si ay u qabtaan kalluun, markaas komberesarrada ogsijiin tuuray motor doon halka badda. Dhengedihii Kalluumaysiga, screen, iyo adkeysiga neefsashada dabiiciga ah ayaa muddo dheer ka tagay.
Sida loo qabto kalluunka beddelo sida dhib badan si aad u hesho kalluunka, ayaa sheegay in kalluumaysato ah Bajoe ayaa kalluumaysato ah muddo 30 sannadood ah.
"In badan oo ay adag tahay in la helo kalluun. Haddii hore wuxuu ahaa shan kiilomitir oo keliya kalluumeysan kartaa, hadda leeyihiin tobanaan kiiloomitir."
Maxaa sababa? "Waxaa laga yaabaa sababta oo ah in badan oo aad qabtaan kalluun, iyadoo maraakiibta waaweyn," ayuu hadalkiisa raaciyay.
Sare ugu xiran
Lompo Barrang Island, qiyaastii 2 saac gaari doon motor ka Makassar, South Sulawesi, hab-nololeedka ah oo inta badan dadku ku badan yahay kalluumaysiga.
Iyadoo technology ee doonyaha motor oo shabagyadoodii kalluumaysiga, ay sare ugu xiran yihiin nooca ahaayeen ficil weli. Laakiin dabeecadda ku xeeran Barrang Lompo ayaa bilaabay in la beddelo, ayaa sheegay in Mr. Hasbi, hal qof odayaasha tuulada.
"Hadda oo xilli-roobaadka u muuqdeen in ay isa soo taraysa xilli dambe la soo socda. Waxaan iyo sidoo kale muwaadiniinta kale, waxaa la qaadan kulul," ayuu yiri Hasbi.
Dhanka kale Sahbudin, kalluumaysato ah, weli ma badda tag bartamihii-October, laakiin caadi ahaan hore u bilaabeen in ay dhici kalluumaysiga.
"Sida caadiga ah waa xasilloon, laakiin hadda-haatan hadda waa dabayl East weli is qarxiyaan, si aynaan u dhaadhicin, badda," ayuu yiri.
"Run ahaantii, dabaylaha East sidoo kale u tagi kartaa badda, laakiin taasi waa sida ay u adag adag," ayuu yiri Sahbudin.
Hadda, dabaysha ayaa ka dhakhso marka loo eego sanadihii hore
Of Makassar ee South Sulawesi, waxaan Yogyakarta oo weli xambaarsan su'aal isku mid ah. Bartamihii bishii October, roob weli si fiican hoos Suparno yiri.
"Sida caadiga ah mar hore ka jirta, laakiin ma jiraan. Waa in ay roob ma lahayn mar ama laba jeer bishii, laakiin waxa uu leeyahay ma. Haddaba karin, kalaankalka oo kaliya marka ay si caadi ah u da'o lahaa."
In kasta oo roob aan u dhaadhacay, Suparno nasiib weli awoodaan inay ku raaxaystaan biyaha Kulon Webiga Progo, laakiin roobka ku tiirsan beeralayda, dib u dhac ama la'aanta roob isbedelka lana siii. Widyatmoko yihiin beeralayda Ketingan, Yogyakarta.
"Marka loo barbardhigo sanadihii hore, dareemi soo bilowdaan. Sida caadiga ah aan awoodin in ay u aasaan bariis, iyo haatan ma aha. Oo waxaa loo arki karaa qasabkii ayaa sidoo kale la kulmaya abaarta," ayuu yiri Widyatmoko.
Iyo waxa keena? Dolvina Ukung Damus, siyaasadda Chief Duur Fund WWF in Malinau ayaa aaminsan in weli ay adag tahay in aan u sharaxno in beeralayda Dayak Lundayeh ku saabsan waxa keena isbedel dabiiciga ah.
"Ma ahan wax sahlan si ay u sharxaan kululaaneysa ee caalamka iyo isbedelka cimilada dadweynaha," ayuu yiri.
"Waxaana sidoo kale weli lama hubo in daadadka iyo abaaraha ay sababeen waxaa by," ayuu hadalkiisa raaciyay.
"Waxaan halkan ku samaynayaan xisaab roobab muddo 10 sano ah, laakiin weli ma qaar in sababta isbeddelka cimilada, gaar ahaan Kalimantan waa mid weli aad u badan oo kaymaha," ayuu yiri Dolvina.
Laakiin Dr. Rizaldi Boer, oo madax ka ah Iklimatologi ee AHN Beeraha University, ayaa xaqiijiyay in isbedelka cimilada waxa uu durbaba yahay si toos ah dareemay by aadanuhu.
"Waxaan fikir ku heshiin laakiin waa ay dhacaysaa aadan," ayuu yiri Dr. Rizaldi Boer.
Marka laga sababta, isbedelka cimilada ama kululaaneysa ee caalamka, sida muuqata beeralayda iyo kalluumaysatada kuwa ku xiran tahay nooca, waxay bilaabeen in ay dareemaan in dunidu in uu is beddelay. (BBC / Liston Siregar)
Indonesia AS saraysiinta guuldaradoodii ugu horeysay ee kaynta ku yaal
Waxaa nasiib-darro ah marka la joojiyo jaridda ah samayn, laakiin si kastaba ha ahaatee nabaad sii xitaa kor u kacay. Tani waa xog ah in khasaaraha kaynta ee Indonesia ayaa dhaaf ah u korodhay 12kii sano ee lasoo dhaafay, ayaa sheegay baadhitaan cusub oo lagu soo daabacay wargeyska Science.
Waxbarasho ee uu hogaaminayey Matt Hansen oo ka tirsan Jaamacadda Maryland, ogaaday in Indonesia 15.8 million hektar laga badiyay u dhaxeysay 2000 iyo 2012, darajada shanaad ka dambeeya Russia, Brazil, Maraykanka iyo Kanada marka la eego geerida kaynta. Sida ee ku dhowaad 7 milyan oo hektar beeray inta lagu jiro mudada.
Si kastaba ha ahaatee, oo ka mid ah shanta dal ee kaynta ku xusan, oo ku salaysan boqolkiiba, markaas Indonesia waa in darajo hore ee heerka khasaaraha kaynta ah 8.4 boqolkiiba. By la barbardhigo, Brazil laga badiyay kaliya kala bar Joogaba, kuwaas oo.
98 boqolkiiba khasaaro kaynta ee Indonesia, xaalufintu ka dhacayso meelaha sare kaynta cufnaanta ee Sumatra iyo Kalimantan, meesha natiijada diinta beeraha alwaax warshadaha iyo beeraha saliid timireed, horumarinta aad u baahsan ka badan 20 sano ee la soo dhaafay. Gobolka Riau waa tan sarreysa, sida daayay cilmi ee animation sida soo socota:
Xaalufinta sidoo kale kor u kacay ee Indonesia. In heerka sanadka 2011/2012 khasaaro kaynta gaadhay heerka ugu sarreeya tan iyo dabayaaqadii 1990-, inkastoo xukuumaddu ay soo saartay ku darsigii ganaax (darsigii) ee 65 million hektar oo kaymaha hoose, peatlands iyo kaymaha. Data tusay joojiyo kaymaha ah, oo waxaa la hirgeliyey oo qayb ka ah Indonesia ay ka go'an tahay in la yareeyo qiiqa ka xaalufinta iyo nabaad kaynta, waxaa laga yaabaa in ay ku guuldareysato loo ahaado markii hore la filayay.
Daraasad sii daayay in this aad lid ku shaaciyay warbixin horaantii sanadkan Wasaaradda Dhirta ee Indonesia, kaas oo sheegay in nabaad-sanadeedka ayaa la taaban karo hoos u dhacay tan 2005/2006. Tirokoobyada ayaa laga yaabaa in ay sabab u tahay kala duwanaanshaha dhici habka xisaabinta.
Wasaaradda Dhirta qiyaasta dayaca xaalufinta dhulka ka baxsan goobaha kaynta oo kuma jiraan qaab beddelidda ee kaymaha dabiiciga ah si xoqayaa in geed warshadaha, taas oo loo arko Wasaaradda Dhirta in dirka ah "kaynta."
Xogta cusub, ee ku salaysan natiijooyinka haya'ad 650,000 images sawirka NASA Landsat by Google Earth Engine, iyada oo model Kombuyuutarada daruur, daabacay database dhamaystiran of map kaynta caalamiga ah waa falgal. Xogtan waxaa laga heli karaa sida content lacag la'aan ah http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest
Hansen, ayaa la daabacay qaar ka mid ah waraaqaha on xaalufinta, ayaa sheegay in uu rajeynayo map-ka ayaa kaa caawin kara dal si ay u horumariyaan siyaasadaha fiican si loo yareeyo khasaaraha kaynta.
"Tani waa isku day ugu horeysay si ay u bixiyaan isbedel kaynta map joogto ah labada mid caalami ah oo heer maxalli ah," Hansen ku sheegay hadal uu. "Brazil oo isticmaalaya xogta Landsat si ay qoraal heerka jaridda, sidoo kale waxay warbixinta u isticmaalaysaa in qaababka hirgelinta siyaasadaha. Waxa kale oo ay wadaagaan macluumaadka, si ay u awood dhinacyada kale si ay u qiimeeyaan iyo xaqiijiyo guusha. "
"Data Previous aan weli la heli karo si dadweynaha ee qaybaha kale ee adduunka. Haddaba khariirada adduunka oo waxaan ku siin karaan macluumaad ku saabsan isbeddellada ku kaynta halkaas oo dal kasta yeelan karaan helitaanka macluumaadkan, oo labaduba dalka iyo dunida oo dhan. "
DEEGAANKA DHIBAATADA SUUBAN saboolnimo ay horseedday
Google shirkad hormuud u berrinkii tiknoolajiyadda macluumaadka abuuraa ah isbedel map caalamiga ah ee degaanka kaynta in uu leeyahay xal sare iyo faa'iidooyinka iyadoo la kaashanayo Google Earth. Iyada oo isbedel xogta degaanka kaynta ku yaal oo lagala socon karo burburinta kaynta dhacda in dal kasta.
The falgal aalad online laga heli karaa iyadoo dadweynaha iyo ka arki kartaa meesha uu si faahfaahsan iyada oo heer sare ah xallinta 30m.
Map wuxuu ka kooban yahay garaaf kaynta adduunka safraya soo bilaabo 2000 ilaa 2012, oo ku salaysan 650,000 by sawirka dayax-gacmeedka ee Landsat 7.
Intii lagu jiray waqtigaas, dhulka lumiyo ah "kaymaha" la meel loo siman yahay si Mongolia, dhirta ku tilmaamay dabooli karaa lix jeer degaanka ee Britain.
Horumarinta ee dadaallada lagu doonayo in lagu yareeyo xaalufka dhirta oo ay weheliso burburinta kaymaha ee Indonesia, Malaysia, Paraguay iyo Angola, sidu muujiyay baadhitaan ku qoran Journal Science.
"Tani waxaa ay isbedel map ugu horeysay ee kaynta caalami ah oo joogto ah oo ay leeyihiin ku tacaluqa degaanka," ayuu yiri Prof. Matthew Hansen oo ka tirsan Jaamacadda Maryland, oo amiir u ahaa kooxda abuuray map-ka.
"Maxaa laga qaban karaa oo ay computer ah muddo 15 sano ah in lagu dhamaystiro karaa maalmo yar ka isticmaalaya Google Earth Engine."
Cilmi baaris ayaa muujinaysa tirada muhiim ah in isbedelada kaynta ka soo 2000-2012 - oo ku salaysan sawirka dayax-gacmeedka.
World badiyay 2.3 milyan oo kiiloomitir oo laba jibbaaran kaynta in muddo ah, sababo la xiriira jaridda, dababka, cudur ama masiibo.
Laakiin caalamka sidoo kale ka heli goob kaynta cusub oo dheeraad ah oo daboolaya meel ka mid ah 800,000 oo km oo iskuwareeg ah, dhaawac ah tirada guud ee 1.5 kiiloomitir oo laba jibbaaran.
Marka la barbar dhigo dalalka kale, xaaladaha kaynta Brazil muujiyeen horumar, oo leh heerar hoose ee khasaaraha kaynta u dhaxaysa 2003-04 iyo 2010-2011.
Dhanka kale, burburinta kaymaha ee Indonesia ka badan labanlaab marka la barbar dhigo xaddiga nabaad sanadkiiba in ay gaaraan 20,000 kiiloomitir 2011-12 korodhay.
Paraguay, Malaysia iyo Cambodia ayaa heerka ugu sareeya ee burburinta kaynta.
Guud ahaan, kaymaha kulaylaha kor u 2,100 Km sannadkii, sida ay warbixintu sheegtay.
Map ayaa la joogta ah loo cusboonaysiiyo doonaa oo waxaa loo isticmaali karaa qiimeeyo waxtarka ah barnaamijka maamulka kaynta.
Waxa kale oo ay kaa caawin karaan kooxaha deegaanka ka dhanka ah saamaynta nabaad - oo ay ku jiraan hanjabaado duwanaanshaha noole, kaydinta carbon iyo isbedelka cimilada.
Sir David King, a Dibadda Ergayga Gaarka British on Climate Change ayaa sheegay in Indonesia kaalin muhiim ah ka qabashada isbedelka cimilada sababta oo ah waxa uu leeyahay wax badan oo kaynta.
"Indonesia waa ugu dhex jira dalalka soo koraya horumar ka qabashada isbedelka cimilada," ayuu yiri David King ee Jakarta, Jimcihii (21/2).
Daa'uudna wuxuu ku yidhi Indonesia iyo UK waxay leedahay dhibaato la eego isbedelka cimilada waa isku mid, kuwaas oo daadadka. Labada ee Indonesia iyo England, daadad ay sabab u tahay isbedelka cimilada saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha.
Sidaa darteed, arrinta isbedelka cimilada waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee bulshada adduunka oo dhan.
"Waxaan oo dhan ayaa masuul ka ah wax ka qabashada isbedelka cimilada. Waxyaalaha qaarkood la samayn karo waa in la yareeyo, isticmaal iyo dib u qashinka," ayuu yiri.
David ayaa sheegay in isbedelka cimilada ka qabashada waa in la sameeyaa si degdeg ah sababtoo ah saamaynta ay filayaa noqon doonto weyn ee mustaqbalka.
Wuxu sheegay, in daadkii waa khatar aad u dhabta ah ee isbedelka cimilada. Sidaa darteed, isbedelka cimilada, ayaa sababay in barafka badweynta Arctic dhalaalay in kor loo qaado heerka badda. "Jasiiradda kasta oo dunida ayaa halis la mid ah, kuwaas oo u kacaya heerka biyaha badda si biyaha gudaha tegi doonaa oo waxaan ka dhigi daadadka. London, tusaale ahaan, marka laga soo tago halista ka badda waxaa sidoo kale jira khatar ah oo webi," ayuu yiri.
Si aad u qabto isbeddelka cimilada, ayuu dhiiri dalalka aan kaymaha si looga hortago xaalufinta ama nabaad. "Burburinta Forest dardar isbaddalka cimilada," ayuu yiri.
Xaalada kaymaha ee Indonesia ayaa haatan ku jira xaalad ah dhibaatada. Dhirta iyo xayawaanka badan oo ku nool iyaga oo ku yaboohi dabar. Intaa waxaa dheer, waxaa jira dad badan oo dhaqamo oo ku xiran kaynta ayaa sidoo kale ku hanjabay. Laakiin ma wax walba waa war xun.
A adag xaqiiqada, waxa aan arki karnaa gobolka kaymaha naga kulaylaha: jaridda sharci-darrada ah (dhir-jaridda sharci-darrada ah) iyo dabka kaynta haddii ula kac ah ama aan. Jaridda sharci-darrada sii kaynta ku wareegsan Riau, Sumatra. Su'aasha in isla markaa waa, sida qaddar ee xoolaha Shabeel-gud Sumatran hadda si isa soo taraysa u yar? Maxay noqon doonaan bakhtiyeen socda qaddar ee Java iyo Bali shabeelka hadda ku nool sheekada? Ma aha oo kaliya in Java, Sumatra iyo Borneo ee kaymaha kulaylaha ee Papua kale waxaan bilawnay badan oo ku beddeleen kala beeraha saliid oo timir ah.
Bal yaa og sida wax sidan oo kale u sii socda oo burbur iyo in hannaanka kaynta iyo hanjabo jiritaanka noole ku jira. Ma aha oo kaliya dadka deegaanka in kaynta, dhar dhaqan-bulsheed ee dadka ku wareegsan loo gargaarayn carqaladeeyey lahaa. Iyadoo khasaaraha ka mid ah kaymaha sidoo kale ka dhigan tahay khasaaraha ka mid ah il nololeed ee badi dadka dalka Indonesia, sababtoo ah kaynta waa meel si aad u hesho cunto, daawo iyo noqday aasaaska nolosha dadka intooda badan, gaar ahaan kuwa ku nool meel u dhow kaynta.
Burburinta deegaanka Human weli mushaaxaan. Waxaa la joogaa waqtigii loogu talagalay dhammaan madaxda sare ee wasaaradda deegaanka, ee ilaalada iyo doorkooda bulshada ku wareegsan kayntana filaayo in waaba dhacdooyinkaan waxay sii wadi in lagu celiyo mar kale iyo soo noqnoqda.
Ha noo eegto oo ay bartaan qabiilooyinka badan wadaniga ah kala firdhiyey oo dhan Indonesia, ay guud ahaan lahaa inay wax ka qabtaan saaxiibtinimo deegaanka iyada oo hawlaha nolol maalmeedka, Oo innaguna waxaynu nahay dadkii badnaa oo magaaladu uu, dhab ahaantii aad u yar ka walaacsan deegaanka u dhaqmo.
Xigmadda deegaanka Sidaas aad u badan ka qabiilooyinka wadaniga ah ee kala duwan oo ku kala baahsan yihiin Indonesia oo dhan in dhamaan aan daba iman doona.
Muhiimadda Forest City dabeecadda iyo deegaanka ku xeeran
Kaymaha agtiinna ah ee jeer oo casri ah, waayadan dambe. Kaymaha Baydka galay hab aadanaha si ay cunto u heli. Laakiinse haatan ka laabtay, kaynta xitaa loo tixgeliyaa sida ooday ee magaalada si ay u dhisaan hoy ama dhismayaasha dhaadheer.
Magaalooyinka ee Indonesia dhif ah aan helno kaynta magaalooyinka. Horumarinta Urban ayaa lagu waday inuu ka jecel horumarka la taaban karo iyo waxa aan ku weheliyay dhul cagaar ah oo ku wareegsan. Oo dalkana bannaan soo wareeg dhismaha oo kaliya in loo isticmaalo meelaha baabuurta la dhigto aan geedaha cagaarka ah. Sidaas halkii kaynta magaalooyinka aan helno, laakiin duur ah oo la taaban karo.
Goobta Tani waxay u muuqataa dhismayaasha Dhismaha bertebarannya. Inta indhahayagu u fiiriyaan oo keliya dhismayaasha dhaadheer iyo aagga cagaaran furan oo waa in 30% ka mid ah magaalada sida haddii iska dayacay la halkii horumarinta.
Sidaas darteed, sannad kasta magaalooyinka waaweyn ee Indonesia soo maray dhibaatooyin kala duwan marka xilli-roobaadka soo gaaray. Laga bilaabo daad, meel walba, tayada deegaanka iyo hawada miskiin noqdo, sababtoo ah ee wasakhda soo saaray baabuurta ma awoodaan inay la dejiyo oo lagu sifeeyay by dhirta jira. Jiritaanka meelaha furan cagaaran waxtar u yeelata in aynaan iska indha karo iyo ka ciyaaraan door ee u dhan looga gudbo.
Sidaas, mar dambe ma ay sugin. Jiritaanka kaynta magaalooyinka waa baahida loo qabo in innaga dhammaanteen u bixiyey. Bal aan ka bilowno nafteenna ka iyo maamulka dhiiri si ay u abuuraan kaynta dheeraad ah oo magaalada aan ku noolahay.
1. Eebe Kaliya intooda badan iyo Marnaba Dulmi addoomadiisa.
2. Alle reebayna kezhaliman noqday
3. Alle reebayna kezhaliman ha Ahaato Addoomadiis.
4. Waa in uu si caddaalad ah oo isugu shabahay iyo waa in aan sameeyo Dulmi / cadaadis si qof.
5. kezhaliman waa gudcur Maalinta Qiyaame.
6. kezhaliman daalimiinta ugu sameynayo shirk ama la-hawlgalayaasha wadaajiseen Eebe wax.
Anoo addoonkaaga ah 7. arxan dadka kale, ama taliye in maadooyinka uu, ama shaqeeye inuu shaqaalaha, iyo kuwa kale oo loo ciqaabi doonaa / abaal Eebe tan iyo Maalinta Qiyaame.
8. arxan cadho menyebabkandatangnya iyo ciqaabta Eebe.
9. Waxaanu noqon doonaa si taxader leh uga do'anya dadka dizhalimi ama silciyo, sababta oo ah waxay baryadaadii waa la siiyey Eebe Ilaaha Qaadirka ah.
10. Mamnuucidda adag oo digniin ka dhan ah hahaysee iyo bakhaylnimada.
11. hahaysee iyo axmaqnimo, ay ka mid yihiin sababta keentay faafidda dembi, burburinta, cadaawad, iyo waxyaabo kale oo xun.
12. axmaqnimo iyo gaajo hahaysee galay dembi weyn oo sababay burbur ku dunida iyo Dulli tiigsado maalinta Qiyaame.
13. nimadii jiidi doonaa bulshada caalamka ee ka dhanka ah adeegyada iyo iyaga hoobto in dhiig iyo munkarka.
14. Kuwa Rumeeyey leeyihiin nooca Karim (deeqsi ah) iyo wax badan oo samafal, halka kuwa munaafiqiinta ah ay leeyihiin nooca haraysa, hunks, iyo Bakhayl.
15. Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii ka reebnay wax samayn zhalim iyo bakhayli uu magan Eebe Ilaaha Qaadirka ah si waxshinimo ah iyo nooca ay martida.